အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းခရီးစဉ်အထုပ်များ | Call: + 91-993.702.7574
ဒူဘိုင်း Tours မှ
သင်၏မိတ်ဆွေများသို့မဟုတ်မိသားစုနှင့်အတူပျော်စရာအပြည့်ဖြည်အားလပ်ရက်များအတွက်စီစဉ်? တစ်ဦးကကောင်းကောင်းပြတိုက်မှူး အိန္ဒိယကနေဒူဘိုင်းခရီးစဉ်အထုပ်များ သင်တို့တွင်အအိပ်မက်သမျှသောပါ! ပျော်စရာ & အပန်းဖြေဖို့စျေးဝယ် & စွန့်စားမှုကနေ - ဒူဘိုင်း သင်ကရှိပါတယ်ထက်ပိုပြီးအရာတစ်ခုခုနှင့်အတူကြိုဆိုသည်။
အံ့မခန်းမိုးမျှော်တိုက်, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဆွဲဆောင်မှု, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်တွေကတော့, သဲကန္တာရ Safari, & ပိုပြီးအတူ - မြို့အဘယ်သူမျှမမိတ်ဆက်စကားလိုအပ်ပါတယ်! အဆိုပါမြို့လုပ်ဖို့အရာတစ်ဦး smorgasbord မှုအဟောင်းနှင့်အသစ်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာပေးထားပါတယ်။ ပြန်လုပ်ပါ ... သောက်ရွက်, chit-chat ဖတ်, အပန်းဖြေ, ဆိုင်, run, Walk - သင်ကကိုကြည့်မည်သို့ပင်လမ်း, ဒူဘိုင်းယုံကြည်သည်ခံရဖို့ကိုတှေ့မွငျရမညျဟုအမြိုးမြိုး၏ဆန့်ကျင်သည်။ အဘယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့4ည5ရက်ပေါင်းဒူဘိုင်းအထုပ်များနှင့်အတူအိပ်မက်၏မြို့ကြည့်ဖို့ပိုကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်၌မဆိုအမြို့မြို့တို့မှ Bhubaneswar သို့မဟုတ်ဒူဘိုင်းဒေသခံ Tour Packages ကနေမွမ်ဘိုင်း, ဒူဘိုင်းခရီးစဉ်အထုပ်များအနေဖြင့်ဒူဘိုင်းခရီးစဉ်အထုပ်များရှာကြသည်ရှိမရှိ အိႏၵိယကျနော်တို့အခြားအဆင့်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်အတွေ့အကြုံကိုယူပြီး, သင်စျေးအချိုဆုံးဒူဘိုင်းအထုပ်များဆက်ကပ်။
Ramada ချယ်လ်ဆီးအယ်လ် Barsha (4 စတား)
အခန်းအမျိုးအစား: 01 အငယ်တန်း Suite အခန်း
ရွှေ Sands သည် Bur ဒူဘိုင်း (3 စတား)
အခန်းအမျိုးအစား: 01 မိသားစု Suite အခန်း
Marhabaan Bik fi ဒူဘိုင်း - ဒူဘိုင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်
လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကဒူဘိုင်းလေဆိပ်များတွင်ရောက်ရှိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ဒူဘိုင်းဟိုတယ်မှလွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့်တွေ့ဆုံ & ကိုနှုတ်ဆက်ကြလော့။ ဒူဘိုင်းဟိုတယ်ထဲမှာစစ်ဆေးပါ။ ဆစ်အခြေခံပေါ်မှာညစာစားပွဲဘူဖေးနှင့်အတူတစ်နေ့တာအပန်းဖြေညနေပိုင်း Dhow Cruise နဲ့ @Marina အရာကြွင်းလေ (19 အကြားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတက် Pick: 00Hrs-19 ။ 30Hrs အတိအကျအချိန်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်) ။ နေ့ချင်းညချင်းဒူဘိုင်းဟိုတယ်၌
နံနက်နံနက်စာ။ ဆစ်အခြေခံပေါ်မှာတစ်ဝက်နေ့ဒူဘိုင်း City Tour (တက် Pick 08 အကြားဖြစ်လိမ့်မည်: 30Hrs-09 ။ 30Hrs အတိအကျအချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့ကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်) ။ ဝမ်းကခုန်တွေနဲ့အတူသဲခုံ Bash များအတွက်4×4မြေယာသင်္ဘောနှင့်အတူနေ့လည်ခင်းကန္တာရဆာဖာရီ, tanoura ပြပွဲ, ကုလားအုပ်စီး, heena ပန်းချီနှင့် BBQ ညစာဆစ်အခြေခံပေါ်မှာစခန်းချမှာတာဝန်ထမ်းဆောင် (15 အကြားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတက် Pick: 00Hrs-15 ။ 30Hrs အတိအကျ 22 နာရီ): အချိန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသခံအဖွဲ့ကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်, သို့ပြန်သွားသည်အချိန် 00 ဖြစ်လိမ့်မည်။ ကန္တာရစခန်းမှာညစာ။ နေ့ချင်းညချင်းဒူဘိုင်းဟိုတယ်၌။
နံနက်နံနက်စာ။ 9Hrs-00: 10Hrs Entry လက်မှတ်နှင့်လွှဲပြောင်းနှင့်အတူအံ့ဖွယ်ဥယျာဉ်မှသွားရောက်ကြည့်ရှု 00 အကြားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတက် Pick ။ အတိအကျအချိန်) ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်။ ဆစ်အခြေခံပေါ်မှာ Dubai Mall မှာလက်မှတ်တွေနဲ့ဂီတရေပန်းပြပွဲနှင့်အတူ Burj Khalifa မှညနပေိုငျးအလည်တစ်ခေါက် (တက် Pick & အချိန် drop ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်) ။ ဒူဘိုင်းဟိုတယ်၌အိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်ညတွင်းချင်းမှာညစာ။
နံနက်နံနက်စာ။ (9Hrs-00 ။ 10Hrs အတိအကျအချိန်ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်များကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည် 00 အကြားဖြစ်လိမ့်မည်ကိုတက် Pick) ဆစ်အခြေခံပေါ်မှာဝင်ပေါက်လက်မှတ်တွေ & Transfers အထွေထွေနှင့်အတူ Ferrari ပြိုင်ကားပန်းခြံမှခရီးစဉ်နှင့်အတူအပြည့်အဝနေ့အဘူဒါဘီဗလီခရီးစဉ်။ အိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင်မှာညစာ။ နေ့ချင်းညချင်းဒူဘိုင်းဟိုတယ်၌။
နံနက်နံနက်စာ။ စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်လှုပ်ရှားမှုများ (Optional Tours မှအဘို့အရွေးချယ်နိုင်သလား) အတွက်တစ်နေ့တာအပန်းဖြေရာကြွင်းလေ။ ဟိုတယ်ကနေအထဲက Check နှင့်ဟိုတယ်သူ့ဟာသူမှာအိတ်စောင့်ရှောက်လော့။ သင့်ရဲ့အပြန်လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ဟိုတယ်ကနေဒူဘိုင်းလေဆိပ်မှညနပေိုငျးလွှဲပြောင်း (03 နာရီထွက်ခွာမတိုင်မီအချိန်အထိ Pick, အတိအကျကိုအချိန်ဒေသခံအဖွဲ့ကအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်) ။
နံနက်စာအတူ 04 Nights နေရာထိုင်ခင်း
PVT Car တွင်ပြန်သွားလေဆိပ် Transfers
ဆစ်အတွက်ညစာစားပွဲနှင့်အတူ Dhow Cruise နဲ့ (နည်းပြခုနှစ်တွင်ထိုင်ခုံ - Shared ယာဉ်)
ဆစ်အတွက်ဒူဘိုင်း City Tour (နည်းပြခုနှစ်တွင်ထိုင်ခုံ - Shared ယာဉ်)
ဆစ်အတွက်ညစာစားပွဲ (- Shared ယာဉ်နည်းပြခုနှစ်တွင်ထိုင်ခုံ) နဲ့ကန္တာရ Safari က
ဆစ်တွင် Burj Khalifa + ရေပန်း (နည်းပြခုနှစ်တွင်ထိုင်ခုံ - Shared ယာဉ်)
ဆစ်တွင်အံ့ဖွယ်ဥယျာဉ် (နည်းပြခုနှစ်တွင်ထိုင်ခုံ - Shared ယာဉ်)
ဆစ်အတွက်ဝင်ပေါက် ticker (- Shared ယာဉ်နည်းပြခုနှစ်တွင်ထိုင်ခုံ) နဲ့အဘူဒါဘီမြို့ခရီးစဉ် + ဗလီ + Ferrari ပြိုင်ကားပန်းခြံ
နထေိုငျသောတဦးတည်းသွားရောက်ကာပိုပြီးမြင်တော်မူသောတဦးတည်းတာကိုမြင် - ဒူဘိုင်းသင်၏နောက်အားလပ်ရက်ခရီးလမ်းဆုံး Make!
သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေဒူဘိုင်း - ဒူဘိုင်း Fi ကို Aintizarik!